Ngesandla faka i-Android 5.0 ku-Nexus 4, 5, 7 no-10 | Izindaba zamagajethi
Landa futhi ufake i-Android 5.0 Lollipop ku-Nexus 5, 4, 7 no-10
Ekugcineni iGoogle inayo ukhiphe izithombe zasembonini ze-Android 5.0 Lollipop Njengama-OTA afinyelela kumadivayisi alandelayo: i-Nexus 5, i-Nexus 4, i-Nexus 7 ne-Nexus 10.
Ngokulandelayo sizoqhubeka nemininingwane ungazifaka kanjani ngesandla izithombe zefektri ye-Android 5.0 nganoma yimaphi kulawa ma-terminals kepha awunaso isineke sokulinda i-OTA futhi ufuna ukuthola zonke izinzuzo nezimfanelo ezinhle zeLollipop ze-Android manje
Kufanele ukhumbule ukuthi ngaphambi kokuqala ukufakwa mathupha kwesithombe sefektri, kufanele ucabangele kufanele ube umsebenzisi othuthukile. Ungangcolisi ngayo uma ungakaze uqalise i-terminal yakho noma ufake i-ROM yangokwezifiso. Futhi uma bekungokokuqala, landela zonke izinyathelo kahle ngoba asinasibopho salokho okungenzeka kudivayisi yakho.
Tshela ukuthi le nqubo kuzosula yonke idatha efonini noma kuthebhulethiNjengoba izithombe zasefektri zibuyisela idivayisi esimweni sokuthengisa nje.
2 Ivula i-bootloader
2.1 Okwenzela amafasitela
3 Ukufaka i-Android 5.0 Lollipop ku-Nexus 4, 5, 7 no-10
Landa isithombe esifanele sefektri ye-Android 5.0 I-Lollipop yedivayisi yakho: I-Nexus 5 (GSM / LTE), I-Nexus 7 2012 Wi-Fi, I-Nexus 7 2013 Wi-Fi, Nexus 10 y Nexus 4.
Landa Los Amashayeli we-Nexus USB
Idivayisi ye-Nexus ene- i-bootloader ivuliwe
Ikhompyutha ene I-ADB ifakiwe futhi yahlelwa
Activa "Ukulungisa iphutha le-USB" kuzilungiselelo> Izinketho zonjiniyela. Ukwenza kusebenze lezi zinketho kusuka ku-Amasethingi> Mayelana bese ucindezela izikhathi eziyi-7 kunombolo yokuhlanganisa
Uma nganoma yisiphi isizathu ikhompyutha ingayiboni idivayisi yakho kufanele uye kwisitoreji, uphawu olunamachashazi amathathu aqondile bese ukhetha ukuxhumeka kwe-USB kwikhompyutha. Khubaza i-MTP bese ukhetha i-PTP.
Faka i-ADB futhi yamiswa. Yilande kusuka kulokhu isixhumanisi. Lapho ufaka kubalulekile ukuthi ake sikuthole ku-hard drive C. Ukusuka lapha singenza zonke izenzo.
Manje kufanele vula i-CMD kusuka kule ndawo: C: android-sdkplatform-tools. Cindezela usonhlamvukazi bese ngasikhathi sinye qhafaza kwesokudla kufolda yamathuluzi esiteji. Inketho "iwindi lomyalo ovulekile lapha" izovela kumenyu ye-pop-up.
Manje kufanele cisha idivayisi ngokuphelele bese uyixhuma kwi-PC nge-USB
Kusuka ohlotsheni lwewindi lomyalo "Amadivayisi we-Adb" ngaphandle kwezilinganiso. Kuzofanele uthole inombolo yedivayisi yakho exhunyiwe. Uma kungenjalo, iya kuqhinga langaphambilini ukukhetha i-PTP ekuxhumekeni kwe-USB kwikhompyutha bese uhlola ukuthi amashayeli we-Nexus USB afakiwe yini
I-adb yokuqalisa kabusha i-bootloader
Idivayisi iqala kabusha futhi ingene kumodi ye-bootloader
ukuvula i-fastboot oem
Landela i- imiyalo esesikrinini zedivayisi yakho ye-Nexus
Qalisa Isikhumulo bese ubhala umyalo wokumisa i-ADB ne-Fastboot:
I-bash <(i-curl https://raw.githubusercontent.com/corbindavenport/nexus-tools/master/install.sh)
Zulazulela ku- Okuncamelayo kwesistimu> ikhibhodi - izinqamuleli, bese kuba kumasevisi. Thola inketho ukuphela okusha kwifolda bese uyisebenzisa.
Xhuma Idivayisi ye-Nexus ku-Mac yakho nge-USB.
Khipha okuqukethwe kwesithombe kufolda kudeskithophu. Qhafaza kwesokudla kufolda bese ukhetha amasevisi lapho kuvela imenyu, chofoza esigungwini esisha kufolda.
Okulandelayo ewindini lokugcina ukuze uqalise kabusha idivayisi kumodi ye-bootloader:
Ngemuva kwalokho ukuvula:
Landela i- imiyalo kusikrini sedivayisi
Ukufaka i-Android 5.0 Lollipop ku-Nexus 4, 5, 7 no-10
Khipha okuqukethwe kwesithombe sefektri kufolda efanayo yamathuluzi esiteji kusuka ku-adb lapho ngaphambili sivule khona iwindi lomyalo
Kusuka kufolda efanayo vula iwindi lomyalo futhi ukulandela inqubo engenhla (usonhlamvukazi + chofoza kwesokudla kufolda) noma ukuphela ku-Mac
Senza i- ukusulwa okuphelele kwememori yangaphakathi ngemiyalo elandelayo:
i-fastboot isula i-boot
I-fastboot isula i-cache
i-fastboot isula ukutakula
fastboot isula uhlelo
Ngemuva kwalokho faka ifayili lesithombe sefektri owake wakhipha uziphu kufolda yamathuluzi esiteji: (lapha kufanele ukopishe igama lefayela le-zip lesistimu njengoba linjalo. Lizohluka kuye ngemodeli ngayinye futhi isibonelo yi-wifi ye-Nexus 7 2012 ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka)
Fastboot - w buyekeza isithombe-nakasi-lrx21p
Abasebenzisi be IMac neLinux Kufanele uchofoze kwesokudla kufolda lapho kunesithombe sefektri, bese uzulazulela ezinsizakalweni bese uchofoza ukuphela okusha kwifolda bese uthayipha umyalo olandelayo:
Manje kuzothatha imizuzu embalwa ukuqala nokulungisa futhi yilokho kuphela
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Landa futhi ufake i-Android 5.0 Lollipop ku-Nexus 5, 4, 7 no-10
I-Html2Text: Amaqhinga okuguqula ikhasi lewebhu libe yidokhumenti yombhalo ocacile
Inselelo ye-DARPA Robotics, hlangana nabangu-11 abangene kowamanqamu